Madaxweyne Gaas oo sheegay in Wadanku aanay ahayn Muqdisho oo keliya – Puntland Voice
Madaxweyne Gaas oo sheegay in Wadanku aanay ahayn Muqdisho oo keliya
April 26, 2018 12:56 pm Views: 30
Madaxweynaha dowlada Puntland Mudane Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo warbaahinta caalamka kula hadlayay magaalada Abu Dubai ayaa sheegay in Puntland u madax-bannaan tahay in ay gasho heshiisyo caalami ah sida uu dhigayo ayuu yiri dastuurka dowlad gobolleedka.
Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo warbaahinta caalamka kula hadlayay magaalada Abu Dubai ayaa sheegay in Puntland u madax-bannaan tahay in ay gasho heshiisyo caalami ah sida uu dhigayo ayuu yiri dastuurka dowlad gobolleedka.
Abdiweli Gaas wuxuu sheegay in Puntland Somalia dhul ahaan ka tahay 3 meelood hal qeyb, dad ahaana ka tahay 4 qeybood hal qeyb, Puntland tahay dawladda kaliya ee saaran Badda Cas iyo badweynta India, Dastuurka Puntland qorayo in ay heshiisyo caalami ah geli karaan, kuna dhaqmayaan dastuurkooda, dawladda Soomaaliya go’aan ka gaari karin arimaha Soomaaliya oo dhan ilaa iyo inta laga helaayo Dastuur Rasmiya.
Gaas ayaa sidoo kale shirkiisa jaraa’id ku sheegay in Imaaraadka uu yahay dalka kaliya ee taageera Dowladda Puntland islamarkaana yahay Imaaraadka dal ay wadaagaan Ganacsiga.
Madaxweyne Gaad Waxaa uu sheegay in Dowlada Imaaraadka uu kala dhaxeeyo xiriir aad u dheer dhinaca nabad-galyada ah, gaar ahaan la dagaalnaka tahriibka, argagixisada, burcad badeeda iyo waliba kalluumeysiga sharci darrada ah.
Waxaana shalay suuqyada magaalada Muqdisho lagu kala iibsanaayey hubkii xerada Imaaraatka ay ku wareejisay Xukuumada Farmaajo waxay ceeb ku tahay hanaankii dowladnimo.